Kalakhabar:: ‘सिरानीसँग रोमान्स गर्थें’
‘सिरानीसँग रोमान्स गर्थें’
प्रकाशित मिति : Thursday, March 30, 2017
‘नाइँ नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेकी हुन्, अभिनेत्री आँचल शर्माले । पहिलो फिल्मबाट औसत प्रतिक्रिया पाएकी आँचल दोस्रो फिल्म ‘जोनी जेन्टलमेन’ले भने आफूलाई राम्री अभिनेत्रीको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा विश्वस्त छिन् । दर्शकले अटोग्राफ मागेको र केहीले आफूलाई विदेशी ठानेकोमा आँचल फुरुङ थिइन् ।
पोखरामा आँचलको चर्चा छ रे ! सबजनालाई आँचलले छायामा पा¥यो भन्छन् ?
नाइँ…त्यस्तो त केही हैन होला । तर, मेरो हिसाबले चाहिँ मलाई पोखराको ¥याम्प अनुभव स्मरणीय रहनेछ । यस्ता शोमा हिँडेको अनुभव थिएन । के होला ? कस्तो होला ? भन्ने थियो तर हिँडिसकेपछि मलाई खोज्दै थुप्रै दर्शक आउनुभयो र कस्तो राम्रो देखिएको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँहरूको कुरा सुनेपछि चाहिँ राम्रो भएछ भन्ने लाग्यो । त्यहाँ क्याटवाक गर्नेमा सबैभन्दा कम अनुभवी म नै त थिएँ । त्यही कारणले पनि दुविधा थियो ।
शोमा थप केही रोचक कुरा ?
काठमाडौँ फर्कंदा भयो । ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ यता मैले छ केजी वजन घटाएकी छु । हेयरस्टाइल चेन्ज छ । सायद अलि फरक देखिन्छु होला । गाडीमा काठमाडौँ फर्कने तयारीमा थियौँ । दीपा दिदी (दीपाश्री निरौला)ले मलाई हेर्दै को कुइरेनी हो भनेर सोध्नुभयो । मैले आफूलाई चिनाएपछि बल्ल चिन्नु भो । उहाँले नचिन्नु भएको देखेर रमाइलो लाग्यो ।
अभिनय र ¥याम्पवाक, के गाह्रो ?
अभिनय गर्न नै गाह्रो हुन्छ नि । ¥याम्पका लागि तपाईंलाई बेसिक दुई तीन वटा कुरा थाहा भए पुग्छ तर अभिनयका लागि हजार कुरा जाने पनि कम हुन्छ ।
त्यही भएर मोडलहरू फिल्म खेल्न डराएको हो ?
सायद हो । किनकि, अभिनय भनेको लाखौँकरोडौँसम्म पुग्ने कुरा हो । मानिसले यसमा सानो–सानो कुरामा पनि जज गर्छन् । राम्रो गरेको नगरेको तुरुन्तै थाहा हुन्छ । अनि, ¥याम्पमा बोल्न पर्दैन । तर, फिल्ममा बोली, एक्सन, रियाक्सन सब चीजमा पर्फेक्ट हुनुपर्छ ।
आँचलको फिल्म यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो ?
म एक ठाउँमा जिम गर्न जान्थेँ । मुस्कान ढकाल सरले त्यहाँको इन्स्ट्रक्टरलाई नयाँ केटी कोही छैन फिल्म खेल्न रहर गर्ने भनेर सोध्नुभएको रहेछ । सरले मेरो नाम रिकमन्ड गर्नु भएछ । मैले पनि ट्राइ गरौ न त भनेर सरलाई भेटेँ । सरले अडिसनका लागि बोलाउनुभयो । त्यहाँ विकास आचार्य सर पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले अडिसन दिएँ । एक दुई दिनपछि उहाँहरूले सेलेक्ट भएको खबर पठाउनुभयो । मलाई विश्वास नै लागिरहेको थिएन ।
हैन..त्यत्रो ठूलो ब्यानर. मजस्तो केटीलाई के लिनुहोला र भन्ने थियो । अनि, बाबाले पनि मलाई अडिसन दिनका लागि अनुमति माग्दा यही भन्नुभएको थियो ‘तँ सेलेक्ट त हुन्नस् । रहर छ भने जा’ । तर, सेलेक्ट भइस् भने गर्लिस् ।’ यही कारण पनि खासै अपेक्षा थिएन ।
कहिलेदेखि हिरोइन बन्छु भन्ने सोच आएको थियो ?
हिरोइन बन्छु भन्ने त मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ । तर, मलाई नशा चाहिँ रहेछ भन्ने बल्ल ठम्याउँदैछु । म हिन्दी गीत बज्यो भने पिल्लर ( सिरानी)सँग रोमान्स गर्थें । हिन्दी फिल्मका गीतमा जेजे गर्थे म पनि त्यही गर्थें । सल च्यापेर लजाएजस्तो गर्ने, हाँस्ने, रुने सबै गर्थें जे फिल्ममा गर्थे । तर, मेरा सबै गतिविधिको साक्षी ऐना मात्र हुन्थ्यो । म अनि बाबाले मलाई कहिलै अलाउ गर्नुहुन्थ्यो जस्तो पनि लागेको थिएन ।
भनेपछि अहिले चाहिँ बाबाको सपोर्ट छ ?
एकदमै । अहिले त मैलेभन्दा पनि मेरो प्रमोट बाबाले ज्यादा गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ कसैलाई चिनाउनुप¥यो भने ‘यो मेरी हिरोइन छोरी’ भनेर भन्नुहुन्छ । मलाई थाहा छ मैले त्यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन, बाँकी नै छ तर यसमा पनि बाबाले गर्व गरेको देख्दा असाध्यै खुशी लाग्छ ।
हिरोइन बन्न घरमा विद्रोह गरेका किस्सा धेरै छन् ? फिल्म क्षेत्रलाई कसैले राम्रो पनि भन्दैन । आँचलको बाबा किन अपवाद ?
छोरी अपवाद भएर । मेरा बाबा खुल्ला सोचको हुनुहन्छ । उहाँ आफैँ भन्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँ आफैँमा खराब हुँदैन । मान्छे खराब हुने हो । अनि, उहाँले मलाई यति ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि म कहिल्यै पनि उहाँको त्यो विश्वास टुटाउन चाहन्न । जे पनि हुन्छ बाबालाई भन्छु । बाबासँग सेयर गर्छु ।
सबैकुरा ? अफेयर प्रपोजल ?
अफकोर्स । छोरी र आमाबाबुबीच अविश्वास पैदा हुने कुरा नै यी नै हुन् । म त पहिलेदेखि नै मलाई कसैले प्रपोज ग¥यो, ‘मन पराउँछु’ भन्यो भने बाबालाई भन्छु । तर, तुरुन्तै त हैन । अलि पछि चाहिँ भन्छु । छ महिना एक वर्षपछि । ‘बाबा मलाई फलानो केटाले हे¥यो । यसले मलाई मन पराउँथ्यो सन । यस्तो भनेको थियो’ भनेर सुनाउँछु । मैले बाबासँग कुरा गरेको देखेर मेरो साथीहरू पनि छक्क पर्छन् । उनीहरू त पकेटमनी पनि सीधासीधा माग्न नसकेर ममीलाई भनिरहेका हुन्छन् । तर, म त सबै कुरा भन्छु । बेला–बेलामा बाबाले मलाई सम्झाउनुहुन्छ, ‘तँलाई एसिड हान्देलान् नि । बचेर हिँड ।’ मलाई एक दुईजना केटाले चार पाँच वर्षदेखि कुरिरहेका छन् । बाबालाई सब भनेकी छु ।
अनि, पलसँग आँचल अफेयरमा रहेको पनि थाहा छ ?
ह्वाट ? यो सब वाहियात कुरा हो । पलसँग मैले दुइटा फिल्ममा सँगै काम गरेँ । दुई तीनवटा म्युजिक भिडियो गरेकी छु । त्यसैको आधारमा हल्ला चलाइएको हो । पल र मबीचमा साथीको भन्दा बढी केही सम्बन्ध छैन । बाबालाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ ?
अनि, हल्ला यत्तिकै चल्छ र ? ‘जोनी जेन्टलमेन’मा पलले नै आँचललाई रिफर गरेको चर्चा छ ?
यो सब नचाहिँदो हल्ला हो । तपाईंले नितिन दाइ (नितिन चन्द) लाई सोधे हुन्छ । त्यो फिल्ममा पनि एक घण्टा अडिसन दिएर छानिएकी हुँ । पंखा चलाएर एक घण्टासम्म उहाँहरूले मेरो अडिसन लिनुभएको थियो । हल्ला कै कुरा गर्ने हो भने त मान्छेले ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ मै पनि आँचललाई पलले लिएर गएको थियो भन्ने सुनेँ । तर, मैले फिल्मको वर्कसपमा भेट्नुअघि मैले पललाई राम्ररी चिन्दा पनि चिन्दिनथेँ । मैले उसको भिडियो पनि हेरेकी थिइनँ । वर्कसपमा भेटेपछि बल्ल घर गएर उसको भिडियो हेरेकी थिएँ । यहाँ त यत्तिकै हल्ला चल्दो रहेछ ।
ठीक छ आँचलको पलसँग साथीभन्दा बढीको सम्बन्ध छैन । आँचलको कोही ड्रिम ब्वाई त होला नि ?
अफकोर्स छ । मलाई पहिलो नम्बरमा पर्सनालिटी भएको केटा मन पर्छ । हेर्दा नै एक खालको एटिच्युड देखिनुप¥यो । अर्को मलाई श्रीमतीको चम्चागिरी गर्ने केटा मन पर्दैन । श्रीमतीलाई ड्रप गर्ने, पिकअप गर्ने, बेलुका सधैँ तरकारी बोकेर घर फर्कने, भान्सामा लुसुलुस छिर्ने यस्तो खालको केटा मन पर्दैन । मेरो आदर्श भनेकै बाबा हो । बाबाले पनि यस्तो गर्नुहुन्न र मलाई पनि यस्तो गर्ने केटा मन पर्दैन । तर, ममीले चाहिँ ‘ठूला कुरा गर न पछि दुःख पाउँछेस्’ भनेर तर्साउनुहुन्छ । जेसुकै होस् केटा भनेको चाहिँ मेन्ली नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ?
केटाको मामलामा आँचलको तयारी राम्रो रैछ ? के चाँडै विवाह गर्ने संकेत हो यो ?
एक्चुअल्ली मलाई त चाँडै विवाह गर्न मन छ । अरूको बिहे देखेर कस्तो रहर लाग्छ । रातो सारी, गहना लगाएको कस्तो मन पर्छ । एक वर्षअघि त झनै रहर थियो । तर, दादाको बिहेपछि अलि कम भएको छ । चार पाँच वर्ष चाहिँ कटाउँदिनँ ।
तत्काललाई केही छैन । भर्खरै ‘जोनी जेन्टलमेन’को सुटिङ सकेको छु । अभिनयसँगै मेरो पढाइ पनि जारी राख्नुपर्नेछ ।